Bangiyada ugu Fiican Iiraan - ALinks
Bangiyada Iran, sida adduunka intiisa kale, waa ganacsi aasaasi ah. Dalka hada waxaa kajira in kabadan 42,000 oo ATM ah sidoo kale waxaa jira ATM cusub oo maalin walba laga soo saarayo qeybaha kala duwan ee dalka. Mashiinadan waxay kaliya ku shaqeeyaan nidaamka qaranka (Iiraan) ee kaarka gudaha ee loo yaqaan Shetab. Shetab si fudud waa nooc kaar ah, sida Mastercard, Amex, Union Pay, laakiin kaararka noocan oo kale ah waa kuwo aan waxtar lahayn illaa intaad halkaa joogto.
Maamulka bangiga dhexe waa Bangiga Dhexe ee Jamhuuriyadda Islaamiga ah ee Iran. Bangiga dhexe ee Iran waxaa la aasaasay 1960 waana shirkad dowladeed. Waxay soo saartaa oo ay kormeertaa waraaqaha lacagta iyo kormeerka bangiyada ku yaal Iran. Bangiga Dhexe ee Iiraan wuxuu u adeegaa ujeeddo aad u badan oo ay ka mid yihiin kuwa soo socda:
Lacagta qaranku ha qiimo yeelato
Ilaali dheelitirka lacagaha ee dalka
Fududeynta macaamil ganacsi
In kor loo qaado awoodaha horumarineed ee dalka
Waxaa jira labadaba bangiyada ay dowladu leedahay iyo kuwa aan dowliga aheyn ee Iran. Waxaan ka wada hadli doonnaa qaar ka mid ah bangiyada ugu sarreeya labada noocba waxaanan isku dayi doonnaa inaan ogaanno midka adiga kugu habboon.
Bangiyada ay dowladdu leedahay:
Bank Melli, oo fadhigiisu yahay Tehran, ayaa la rumeysan yahay inuu yahay bangigiisii ​​ugu horreeyay ee tafaariiqda iyo ganacsiga ah oo ah shirkadda ugu weyn ee dakhliga soo gala Iran. Waxaa la aasaasay 1927, waa bangiga adduunka ugu weyn oo leh 3,328 laamood iyo ilaa 40,000 shaqaale caalami ah, gobollada Islaamka iyo Bariga Dhexe. Hantida saafiga ah ee uu soo sheegay bangigu waxay ahayd 76,6 bilyan oo dollar dhamaadka 2016, iyo dakhliga soo gala oo ah 105 bilyan oo doolar.
Bank of Maskan waa mid ka mid ah bangiyada dowladda Iran leedahay ee taageera dawladda iyo horumarinta shirkadaha gaarka loo leeyahay iyo guryaha ee Iran. Bangiga oo laamihiisa ku leh Tehran iyo Mashhad waxaa la aasaasay 1938, xarunteeduna waa Tehran. Waxaa jira shaqaale 12,259 (2019). Sannadkii 2015, bangigu wuxuu soo sheegay US $ 460 bilyan oo wadarta hantida ah iyo 5,02 bilyan oo faaiido saafi ah.
Bangiga Horumarinta Dhoofinta ee Iiraan
Sannadkii 1991-kii, Bangiga Horumarinta Dhoofinta Iiraan ayaa ka mid noqday baananka siyaasadeed ee Iran. Bangiga fadhigiisu yahay Tehran waxaa iska leh dowladda Iran. Waxay siisaa dhoofinta iyo soo dejinta reer Iiraan adeegyo maaliyadeed iyo adeegyo kale oo bangi oo dhaqameed. Bangiga ayaa ka shaqeynayay Iran iyo dalal kale bishii Maarso 2016 shabakad ka kooban 40 laamood. Hantidooda waxay u dhigantaa 6.2 bilyan oo doolarka Mareykanka ah (2020) wadarta dakhliga soo gala oo ah 81.2 milyan oo doolarka Mareykanka ah (2020).
Bangiyada aan Dowliga aheyn ee ugu sareeya:
Sanadkii 2001 EN Bank ayaa la aasaasay waana Bangigii ugu horeeyey ee gaarka loo leeyahay ee Iran, sidoo kale loo yaqaan Eghtesad Novin Bank. Bangigu wuxuu macaamiisha, SMEs, shirkadaha iyo hay'adaha dawladda siiyaa xalka tafaariiqda, shirkadaha, kuwa caalamiga ah iyo bangiyada ganacsiga.
Bangiga EN wuxuu macaamiishiisa u fidiyaa keyd, kaar iyo sanduuqyo dhigaal oo aamin ah iyo sidoo kale akoonno iyo amaah hadda jira; ganacsade, maamulka lacagta iyo adeegyada maaliyadeed; Internetka, taleefanka, moobaylka iyo bangiyada SMS; sarifka lacagaha qalaad, xisaabaadka lacagta, maaliyadda ganacsiga, xawaaladaha, iyo adeegyada ku jira siligga.
Bangiga Mellat waxaa la aasaasay 1980. Bangigu wuxuu bixiyaa adeegyada bangiyada ganacsiga ee Iran, oo ay ku jiraan wareejinta lacagta kaashka ah ee xisaabaadka, ganacsiga forex, waraaqaha lagala xaajoon karo, tas-hiilaadka maalgelinta sarifka lacagaha qalaad ee wareegga lacagaha iyo amaahda maalgelinta muddada dheer ee ECO iyo amaahda dhaqaale ee muddada gaaban ee ECO.
Bangiga Mellat wuxuu kaloo bixiyaa dhaqaale, dib-u-maalgelin, Murabaha, sarrifka lacagaha qalaad, waraaqaha dammaanadda, dhibcaha dukumiintiga, adeegyada gaarka ah ee lacag bixinta, sanduuqyada, sanduuqyada wax lagu rido, Muzzara, qandaraasyada mustaqbalka, kaararka helitaanka iyo adeegyada aasaasiga ah ee bangiyada. Waxay haysaa shabakad ku taal Iran oo ka kooban 1774 laamood iyo Koonfurta Kuuriya iyo Turkiga shan laamood. Wadarta hantida bangigu wuxuu ahaa 62 bilyan oo doolarka Mareykanka ah (2011) dakhliguna wuxuu ahaa 6.761 bilyan USD sanadkii 2013. (2016).
Sidee loo furaa xisaab bangi Iran?
Lahaanshaha koonto bangi waa shuruudaha qof walba maalmahan, maaddaama adduunku si xoog leh u saameyn ku yeeshay teknolojiyadda. Furitaanka xisaab bangi Iran aad ayey uga fududdahay maalmahan Muwaadiniinta Iiraan, waxay u baahan yihiin inay maraan qaar ka mid ah waraaqaha aasaasiga ah ee muhiimka u ah furitaanka koonto. In kasta oo isla goobtaas muwaadiniinta ajaanibta ah laga yaabo inay waxoogaa dhibaato ah la kulmaan inta ay xisaab bangi ka furanayaan Iran. Waxaa jira qawaaniin iyo nidaamyo aad u baahan tahay inaad soo marto ka hor intaadan furan koonto bangi.
Muwaadiniinta Iiraan, qofkasta oo ka sareeya 18 wuxuu furan karaa akoon bangi magaciisa. Codsaduhu wuxuu u baahan yahay inuu bixiyo shahaadooyinkiisa rasmiga ah ee aqoonsiga waqtiga la furayo koontada bangiga. Shahaadooyinkan aqoonsiga rasmiga ah waxaa ka mid ah dhalashadaada ama kaar aqoonsi qaran, baasaboor, iwm.
Muwaadiniinta Ajnabiga ah, haddii ay yihiin deggane rasmi ah ama ay haystaan ​​oggolaansho ama dukumenti kasta oo qaxooti ay xaq u leeyihiin inay ka furaan xisaab bangi Iran Waa inay lahaadaan waxyaalahan inta ay aadayaan bangiga furitaanka xisaab bangi.
Warqad hordhac ah oo uu bixiyay mid ka mid ah macaamiisha la isku halleyn karo ee Bangiga ama mid ka mid ah gobolka iyo / ama danjirayaasha dibedda ayaa ansaxinaya oo la aqoonsanayaa codsadaha kaliya ayaa lagu dabaqayaa codsiga koontada hadda jirta.
Kuwani waa qaar ka mid ah waxyaabaha aasaasiga ah ee aad u baahan tahay inaad tixgeliso intaad ka furanayso xisaab bangi Iran. Waxaan rajeynayaa inaad ka heshay
BanksBangiyada IranBangiyada ugu Fiican IiraanBangiyada Iran
Bangiyada wanaagsan iyo adeegyada maaliyadeed ee Ciraaq.
Guudmar Bangiyada Colombia